Hotel Sheraton Guangzhou Nansha: Hotely eo afovoan'ny Delta Renirano
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Hotel Sheraton Guangzhou Nansha: Hotely eo afovoan'ny Delta Renirano
Oktobra 13, 2017
Sheraton Hotels & Resorts, ampahany amin'ny Marriott International, Inc, vao haingana no nanambara ny fisokafan'ny Sheraton Guangzhou Nansha Hotel tao Guangzhou, Sina. Ny distrikan'i Nansha, izay eo afovoan'ny Delta Delta Voahangy, dia nanjary toerana itadiavana asa sy fialan-tsasatra hatramin'ny nananganana azy ho faritra fivarotana malalaka amin'ny taona 2012. An'ny Yuexiu Group, ny fanokafana ny Sheraton Guangzhou Nansha Hotel dia manamarika ny fananana Sheraton fahatelo ambin'ny folo ao amin'ny Faritanin'i Guangdong, ary ny faharoa ao amin'ny Guangzhou, manasongadina ny lazany sy ny fangatahana ny marika manerantany indrindra an'ny Marriott.
“Faly izahay manokatra ny Hotel Sheraton Guangzhou Nansha eo afovoan'ny Delta Renirano, iray amin'ireo faritra mitombo haingana indrindra ao Shina. Ity hotely ity dia hanome fotoana betsaka ho an'ny mpandeha hiaina ny serivisy fanaovan-tsonia sy programa vaovao nataon'i Sheraton, ”hoy izy Stephen Ho, Mpitantana ambony, Sina Lehibe, Marriott International, "Sheraton dia nanangana ny hetsika Go Beyond ho fankalazana ny faha-80 taonantsikath tsingerintaona amin'ity taona ity, manasongadina ny fahavononantsika hanome serivisy manokana ho an'ireo vahininay. Azoko antoka fa ny Sheraton Guangzhou Nansha Hotel dia ho ohatra tsara amin'ity fandraisana vahiny malaza ity. ”
Sheraton Guangzhou Nansha Hotel dia manolotra efitrano fandraisam-bahiny sy efitrano fandraisam-bahiny miisa 291, izay samy manana ny fomba fijery mahatalanjona an'i Nansha sy ny Reniranon'i Jiaomen amin'ny alàlan'ny varavarankely mahatalanjona. Ny efitrano rehetra dia misy ihany koa ny kojakoja sy ny serivisy fanaovan-tsonia Sheraton, ao anatin'izany ny kojakoja fampiasa amin'ny fatoriana sy fandroana, fahitalavitra efijery 55 santimetatra, efitra fandroana malalaka misy fandroana misaraka, ary faritra asa ahazoana fidirana haingam-pandeha. Ny fotodrafitrasa hafa ao amin'ny hotely dia misy Sheraton® Fitness Center, filomanosana an-kalamanjana sy fivoarana an-kalamanjana mifanila amin'ny vanim-potoana ary koa kojakoja sauna. Ny vahiny koa afaka mifandray amin'ny Sheraton Club Efitrano fandraisam-bahiny, izay manome toerana malalaka sy mahafinaritra miaraka amin'ny sakafo maraina, hors d'oeuvres tolakandro ary safidy safidy zava-pisotro isan-karazany.
Trano fisakafoanana telo ao amin'ny trano fandraisam-bahiny manolotra sakafo mahandro isan-karazany. Feast®, ny sonian'ny marika Sheraton, trano fisakafoanana fisakafoanana tontolo andro, manaram-po amin'ny vahiny amin'ny safidin'ny ankafizin'ny eo an-toerana sy iraisam-pirenena ao anaty rivo-piainana ifandraisana. Yue® Ny trano fisakafoanana sinoa dia misongadina amin'ny tena vidin'ny Cantonese, mifantoka amin'ny akora azo avy amin'ny eto an-toerana sy maharitra. Miyabi, trano fisakafoanana Japoney & Koreana amin'izao fotoana izao, manolotra fahafinaretana Japoney teppanyaki sy Korea BBQ. Ho fanampin'izay, ny tsara tarehy Lobby Loungemisy mofo sy kafe ary dite vaovao, miaraka amin'ny cocktails mamelombelona, ​​toerana mahafinaritra hifaneraserana amin'ireo mpiara-miombon'antoka, fianakaviana na namana.
Sheraton Guangzhou Nansha Hotel no toerana mety hampiantranoana hetsika ara-barotra, fampirantiana lehibe, fampakaram-bady na fankalazana ara-tsosialy miaraka amin'ny habakabaka maherin'ny 2,000 metatra toradroa eo amin'ny efitrano fiasana 11. Ao anatin'izany ny efitrano filalaovana 1,000 metatra toradroa tsy misy latsa-danja, izay miaraka amina foyer 650 metatra toradroa.
"Mino tanteraka izahay fa miaraka amin'ny toerana stratejika misy anay sy ny lova matanjaka Sheraton, ny hotelinay dia ho hotely hifidianan'ireo mpivahiny sy mpizahatany miala sasatra any amin'ny faritr'i Pearl River Delta," hoy i Merlin Wilson, Tale jeneralin'ny Hotel Sheraton Guangzhou Nansha. "Amin'ny maha trano fandraisam-bahiny marika iraisam-pirenena voalohany eto Nansha, faly izahay fa afaka manohana ny fampandrosoana an'i Nansha amin'ny maha foibe fivarotana sy fandraharahana vaovao anay, ary mandray ireo vahiny hijery izay atolotry ity tanàna vavahady ity."
Any amin'ny distrika atsimo indrindra an'ny Guangzhou, Nansha koa no ivon-toerana ara-jeografika ao anatin'ny Shenzhen, Hong Kong & Macao faritra bay, mitana andraikitra lehibe amin'ny varotra iraisam-pirenena sy ny serivisy ara-bola. Miorina tsara ao afovoan'i Nansha, Sheraton Guangzhou Nansha Hotel dia mora idirana ao anatin'ny 45 minitra ny halaviran'ny fiantsonan'ny Railway South Guangzhou sy 90 minitra miala ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Guangzhou Baiyun.